Indlu yasehlathini emaphandleni emaphandleni - I-Airbnb
Indlu yasehlathini emaphandleni emaphandleni
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguAnnegreet & Family
Indawo efanelekileyo yokuhlala ngelixa undwendwela indawo eseMbindi naseMpuma yeNetherlands. Relax kwaye wonwabele ubumfihlo bakho, ujikelezwe yimithi kunye nedlelo elineentyatyambo. Hamba uhambe kakuhle ukunqumla i-Estate emeleneyo (enefama ezindala ezigcinwe kakuhle). Kufuphi zizixeko zeHanseatic League zaseZutphen (8km) kunye neDeventer (9km). Kwakhona, iPaki yeSizwe iDe Hoge Veluwe (22km), apho uya kufumana iMyuziyam yaseKröller-Müller eqaqambileyo enemizobo kaVan Gogh. I-cottage iyure enye ukusuka eAmsterdam
Unayo i-cottage epholileyo kuwe, ke uya kuba nakho ukonwabela ubumfihlo obuninzi. Ezantsi uya kufumana igumbi lokuhlala eliqaqambileyo elineengcango ezityibilikayo kwiveranda enendawo yabucala. Sine-sofabed (ukusonga kwibhedi ephindwe kabini evulekileyo nekhululekileyo) kunye netafile enkulu yokutya eyenziwe ngamaplanga.
Ngexesha lasentwasahlobo, ehlotyeni nasekwindla unokuyonwabela iintyatyambo ezise-de Meadow kwaye ubukele iindidi ezininzi zeentaka. Kwaye mhlawumbi uya kubona i-reindeer kwisitulo sakho esonqenayo. Kwi-terrace kukho indawo yokucima umlilo apho unokulayita khona umlilo opholileyo. Sibonelela ngeenkuni ezininzi.
Ezantsi sinikezela ngococeko olusisiseko kunye neshawa, indlu yangasese kunye nesinki. Ungasebenzisa umatshini wokuhlamba kunye nesomisi kwimbuyekezo encinci. Kwakhona kukho iTV eneNetflix ekhoyo.
Phezulu kukho amagumbi okulala amabini, enye inebhedi ephindwe kabini (i-hotel boxspring) kwaye enye inebhokisi ezimbini zebhokisi.
I-cottage ifudumala kakuhle ngokufudumeza ngaphantsi.
I-cottage ayinayo ikhitshi epheleleyo, nangona kunjalo, kukho ifriji kunye ne-microwave. Kwaye ungakhathazeki malunga nendawo yokumisa imoto yakho. Sinendawo yokupaka.
4.71 · Izimvo eziyi-180
IVoorst yilali encinci eneCawe endala ye12th Century ejonge amathafa omlambo i-IJssel. Inezakhiwo ezininzi ezidala, eziquka i-windmill enomtsalane kunye neefama zembali ezithe saa kule ndawo. Lo mmandla uligugu lokwenyani, awuchukunyiswa luphuhliso olungabukekiyo kwaye angonakaliswa lukhenketho oluninzi.
Amakhulu ambalwa eemitha kude yindawo yokubhaka, kwaye ungathenga iziqhamo zakho kunye nemifuno kumlimi ophilayo, okanye uthenge iitulips ngqo kumlimi.
I-cottage iyiyure enye yokuhamba ukusuka eAmsterdam, kwaye ibekwe kwindawo efanelekileyo ukuze ufumane indawo esembindini naseMpuma yeNetherlands. Izixeko zembali zeHanseatic League zaseZutphen kunye neDeventer (i-9 km) zikufutshane. Okanye ndwendwela idolophu encinci ye-pittoresque yaseBronkhorst iikhilomitha ezingama-20). Unokuthatha uhambo lwasemini olumnandi ukuya kwiPaki yeSizwe iDe Hoge Veluwe (iikhilomitha ezingama-22, kunye nemyuziyam edumileyo yaseKröller-Müller enengqokelela enkulu yesibini yemizobo kaVan Gogh kwihlabathi liphela). Kufuphi nesixeko saseArnhem (33 km) uya kufumana izinto ezinomtsalane ezifana neNederlands Openluchtmuseum, Burgers’ Zoo, kunye neMyuziyam yasemoyeni.
Kufuphi neApeldoorn ungandwendwela iPaleis Het Loo (16km). Eli bhotwe lenkulungwane ye-16 lihombise kakuhle amagumbi asebukhosini kunye neegadi ezintle ezine ....ezityalwe ngokulinganayo iibhedi zeentyatyambo.
Ukuba ufuna ukuphumla / ukuzipholisa, ungaya kwi-Thermen Bussloo ekufutshane (i-4km, enye yeyona ndawo intle kwaye ikhethekileyo ye-sauna, ubuhle kunye neendawo zokungcebeleka kakuhle e-Netherlands).
Umbuki zindwendwe ngu- Annegreet & Family
Sihlala ecaleni kwendlu yeendwendwe kwaye sisoloko .....(kwi-intanethi) sifumaneka ukuba unemibuzo. Nceda uzive ukhululekile ukusicela ezona ndawo zibalaseleyo zokundwendwela, kwaye ukuba uceba ukwenza imisebenzi ekhethekileyo, ungalibazisi ukuchaza iminqweno yakho.
Sihlala ecaleni kwendlu yeendwendwe kwaye sisoloko .....(kwi-intanethi) sifumaneka ukuba unemibuzo. Nceda uzive ukhululekile ukusicela ezona ndawo zibalaseleyo zokundwendwela, kway…